Billboard “Social 50” မှာ Justin Bieberကိုကျော်ပြီး နံပါတ်တစ်နေရာမှာ ရပ်တည်သွားပြီဖြစ်တဲ့ BTS – Trend.com.mm
Billboard “Social 50” မှာ Justin Bieberကိုကျော်ပြီး နံပါတ်တစ်နေရာမှာ ရပ်တည်သွားပြီဖြစ်တဲ့ BTS
Posted on August 15, 2018 by Wint
Billboard “Social 50” မှာ BTS ကတော့ ၅၇ပတ် ဆက်တိုက် နံပါတ်တစ်နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
BTS ပြီးတော့ Justin Bieber က ၅၆ပတ်နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒီနေရာထိ ရောက်လာဖို့ဆိုတာလည်း တော်ရုံကြိုးစားမှုလောက်နဲ့ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်လည်းပါသလို သူတို့ကိုယ်တိုင်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် haters တွေကြားစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာစွာ ထိုးဖောက်လာနိုင်ခဲ့တာ ချီးကျုးစရာပါပဲ။ 👏👏
Army တွေကတော့ BTS ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် နောက်ထပ်အောင်ပွဲခံဖို့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိသွားပြီပေါ့။
Congratulations to @BTS_twt (and ARMY!) who now hold the record for the most consecutive weeks at #1 on the @billboard Social 50, with an impressive 57 weeks! 💜🎉
Don't forget, keep tagging them to help them stay #1 and increase their lead! Let's keep it going ARMY! 👏 pic.twitter.com/xPOUT7Rpt8
— BTS UK ARMY UNITE (@BTSUKUNITE) August 14, 2018
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်.. BTS ရေ...🤞
ဒီလိုအမှတ်တရလုပ်ပေးကြဖို့ဆိုတာ တော်ရုံအချစ်ခံရတာလား မတ်မတ်ဂျီဟိုရေ ❤️
စင်ကာပူမှာ ပထမဆုံးဖျော်ဖြေပွဲအစီစဉ် ပြုလုပ်သွားမယ့် R&B စူပါစတား The Weekend